Xaalka Lionel Messi oo aan weli caadi ahayn – Gool FM
Xaalka Lionel Messi oo aan weli caadi ahayn
(Argentina) 07 Juunyo 2016. Lionel Messi oo isagu dhaawac dhabarka ah uga maqnaa kulankii furtitaanka xulka Argentina ee Copa America oo ay guusha ka gaartay Chile ayaa misane weli xaalkiisu caadi ahayn oo maanta ayuu markale seegay tababarka kooxda.
Laacibka kooxda Barcelona ayaa dhaawacan ka soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii saaxiibtinimo uu xulkiisa la yeeshay Honduras 28-kii May wuxuuna tan iyo markaa ka shaqeynayay sidii uu dib ugu soo laaban lahaa.
Waxaa lagu qasbay inuu fariisto ciyaartii isniinta ee kulankii furintaanka Copa America ee xulka Argentina, laakiin tababare Gerardo Martino ayaa ku niyadsamaa kulanka kaddib in Messi uu taam u noqon doono kulanka labaad ay jimcaha la yeelan doonaa xulka Panama.
Hayeeshee 28-jirka ayay weli u taalaa shaqo badan iyadoo uu markale awoodi waayay maanta inuu tababarka la sameeyo kooxda inteeda kale oo wuxuu sameynayay tababar kaligii ah.
dhanka kale Lucas Biglia ayaa sidoo kale tababarka kooxda ka qeyb qaadan maanta oo wuxuu mid gaar ah la sameynayay Messi.
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Lazio ayaa ka soo kabanaya dhaawac muruqa ah wuxuuna sidoo kale ka maqnaa ciyaartii uu xulka Argentina guusha ka gaaray Chile Copa America.
XULKA EURO: 11-ka xiddig ee abid ugu fiicnaa Koobka Qaramada Yurub oo loo codeeyay!
RASMI: Francesco Totti oo heshiiska u kordhiyey kooxdiisa Roma + Sawirro